SAWIRO:- Raysal Wasaare Kheyre oo gurigiisa ku booqday Guddoomiye Jawaari – Madal Furan
Hoy > Warka > SAWIRO:- Raysal Wasaare Kheyre oo gurigiisa ku booqday Guddoomiye Jawaari
SAWIRO:- Raysal Wasaare Kheyre oo gurigiisa ku booqday Guddoomiye Jawaari
Muqdisho (Madal Furan) Raysal Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa markii ugu horeysay guriga uu degan yahay ku booqday Guddoomiyaha iscasilay ee Baarlamaanka DFS Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Raysal Wasaaraha ayaa la sheegay inuu booqashadan uga gol lahaa arrimo diblomaasiyadeed oo dhabarka ku haya iscasilaadii Guddoomiye Jawaari iyo isbedelkii uu ku sameeyey jawigii siyaasadeed ee Baarlamaanak Soomaaliya oo ahaa mid qasan.
Guddoomiye Jawaari ayaa si wanaagsan u soo dhoweeyey Raysal Wasaaraha iyadoo wixii wakhtigan ka horeeyey uu Guddoomiye Jawaari ku eedeeyey in Raysal Wasaare Kheyre uu ololinayo mooshinka ay ka keeneen Xildhibaano isaga ka amar qaata.
Arrintu siday doonto ha ahaatee, booqashadii xalay ee Raysal Wasaare Kheyre uu tegay guriga Jawaari ayaa noqonaysa mid soo afjartay cuqdadii ka dhex jirtay Labadan masuul.
Maanta oo Khamiis ah ayaa la filayaa in Guddoomiye Jawaari uu toos ah ugu dhawaaqo iscasilaadiisa markaas kadibna uu hadal taariikhi ah ka jeedin doono hoolka shirarka ee Baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Sawiro:- Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka oo la kulmay dhalinyaro si mutadawacnimo ah ugu biiray ciidamada dowladda
R/wasaare Khayre Oo Dardaaran Iyo Dhiirri Gelin Ugu Tegay Ciidan Loo Diyaariyay Howl-galka Argagaxisada+Sawirro
Xubno ka tirsan Golaha Xukuumadda DFS oo loo magacaabay guddiga xalinta cabashada madaxda maamuladda goboladda